Firefox sy LibreOffice: Ahoana ny fampiasana ny dikan-teny vaovao amin'ny AppImage | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | 13/05/2022 06:00 | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Rehefa mampiasa ordinatera isika, na any am-piasana na any an-trano, 2 amin'ireo karazana fampiharana tena ilaina sy ampiasaina matetika ny Web navigateur sy Office Suites. Izay lojika sy mitombina tanteraka, satria ny mpampiasa an-trano na birao antonony, matetika dia mampiasa ireto miaraka amin'ny predilection. Na ny mijery sy mampiakatra, misintona na mijery vaovao. Na, hanokatra, mamorona, manova ary manonta rakitra amin'ny endrika samihafa ho an'ny filanao sy ny zavatra takinao.
Noho izany, ny fampiharana toy ny Firefox sy Libre Office Amin'ny dikan-teny vaovao, dia matetika izy ireo no ao anatiny GNU / Linux tena zava-dehibe. Ary ho an'ity tanjona ity, ny fampiasana ny rakitra fametrahana karazana AppImage, ho hitantsika eto ambany.
Top 10 fanampiny fanampiny mba hahazoana Firefox tsara indrindra sy azo antoka
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirana amin'ny lohahevitra androany momba ny fampiasana Firefox sy Libre Office amin'ny dikan-teny farany indrindra, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rakitra amin'ny endrika .AppImage, dia avelanay ho an'izay liana ireto rohy manaraka ireto mankany amin'ireo boky mifandraika amin'izany teo aloha. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
"Firefox matetika no navigateur web default ho an'ny maro, ho an'ny ankamaroan'ny zavatra rehetra atao amin'ny Internet amin'ny GNU/Linux, na ho an'ny asa na handany fotoana fotsiny. Noho izany, ny fahafantaranao hoe iza amin'ireo add-ons na fanitarana (plugins) mamela anao hanana navigateur web haingana kokoa, maro kokoa, mamokatra kokoa ary miasa kokoa dia tena zava-dehibe sy mahasoa.". Top 10 fanampiny fanampiny mba hahazoana Firefox tsara indrindra sy azo antoka
Tonga miaraka amin'ny fanatsarana, fanamboarana bug ary maro hafa ny Firefox 99
LibreOffice 7.3 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana marobe sy endri-javatra vaovao
1 Firefox sy LibreOffice: Apps tena ilaina amin'ny fizarana rehetra
1.1 Nahoana no mampiasa dikan-teny maoderina amin'ny fampiharana sasany amin'ny Distros taloha?
1.2 Ahoana ny fametrahana Firefox mampiasa AppImage?
1.3 Ahoana ny fametrahana LibreOffice amin'ny AppImage?
Firefox sy LibreOffice: Apps tena ilaina amin'ny fizarana rehetra
Nahoana no mampiasa dikan-teny maoderina amin'ny fampiharana sasany amin'ny Distros taloha?
Ny sehatra lehibe amin'ny mpampiasa dia matetika mampiasa Distrika misy fanohanana miitatra (LTS). Ny hafa, ary azo antoka fa ny ankamaroany, dia manana GNU / Distros Linux fa rehefa mandeha ny fotoana dia tsy mahazo intsony izy ireo fanavaozana ara-dalàna sy fiarovana. Ambonin'ny zava-drehetra, ny fampiharana sasany tena ilaina na manan-danja, toy ny, Firefox sy Libre Office. Na mandray izany amin'ny fotoana mitombo izy ireo.
izay manery ny maro manova ny dikan-teny na ny fizarana, mba hahazoana ny ilaina kinova nohavaozina amin'ireo fampiharana ireo sy ny maro hafa. Na izany aza, ho an'ny hafa dia mety tsy ho mora na irina izany, izany hoe mifindra monina. Ary noho izany dia tsara kokoa ho azy ireo ny manandrana mahazo ireo dikan-teny maoderina sy ankehitriny amin'ny fomba azo ekena.
Satria, dikan-teny vaovao na maoderina, matetika manolotra ny mety indrindra amin'izy ireo, miaraka amin'ny fifanarahana tsara indrindra azo atao miaraka amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo maoderina sy rakitra. Imbetsaka, natao tamin'ny teknolojia manokana sy mihidy.
Noho izany, ho an'ity sehatra farany mpampiasa ity, miaraka amin'ny distros taloha o Distros miaraka amin'ny fonosana fampiharana tsy vao haingana, ny fampiasana ny AppImage fonosana io no idealy. Satria, ny filôzôfia momba ny asa dia azo sokajiana ho azo entina sy mahafehy tena. Fa ny hafa tia Snap na Flatpack, tsy dia be loatra izy ireo.
Ahoana ny fametrahana Firefox mampiasa AppImage?
Mametraka ny navigateur Mozilla Firefox amin'ny endrika AppImage amin'ny dikan-teny farany indrindra, misy ireto manaraka ireto Rohy ofisialy AppImageHub Store. Na mivantana, avy amin'ity hafa ity rohy github.
Raha vao sintonina, ary nomena alalana ho executable ho executable ny executable rakitra, dia ho afaka hanana ny farany ofisialy dikan-tsy misy olana, manatanteraka izany amin'ny kitiho indroa tsotra ny totozy.
Ohatra, amin'ny tranga manokana, nanandrana ny dikan-teny stable farany indrindra amin'ny Mozilla Firefox navigateur mihoatra ny a Operating System miorina amin'ny Debian 8 (antsoina hoe Canaima 5) ary niasa tsy nisy olana, ary tamin'ny teny espaniola tanteraka. Araka ny hitanao eto ambany:
Ahoana ny fametrahana LibreOffice amin'ny AppImage?
Mametraka ny LibreOffice Office Suite amin'ny endrika AppImage amin'ny dikan-teny farany indrindra, misy ireto manaraka ireto rohy ofisialyl avy amin'ny tranokala LibreOffice mihitsy.
Ohatra, amin'ny tranga manokana, nanandrana ny dikan-teny stable farany indrindra amin'ny LibreOffice Office Suite mihoatra ny a Operating System miorina amin'ny Debian 8 (antsoina hoe Canaima 5) ary niasa tsy nisy olana, ary tamin'ny teny espaniola tanteraka. Araka ny hitanao eto ambany:
Ary koa, samy nanandrana aho. AppImage rakitra mihoatra ny a Operating System miorina amin'ny Debian 11 (antsoina hoe MX-21) ary niasa tsy nisy olana, ary tamin'ny teny espaniola tanteraka.
Raha fintinina, manana ny dikan-teny farany sy manara-maso ny "Firefox sy LibreOffice" amin'ny GNU/Linux Distros amin'izao fotoana izao ampiasain'ny rehetra, na antitra be na maoderina, amin'ny alàlan'ny fampiasana rakitra ao Endrika .AppImageZavatra haingana sy tsotra izany. Ary azo antoka fa izany dia hanakana, amin'ny ankapobeny, ny lany andro sy fanariana amin'ny maro GNU/Linux distros izay tsy tohana sy havaozina intsony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Firefox sy LibreOffice: Ahoana ny fampiasana ny dikan-teny vaovao amin'ny AppImage
Fahalalana LibreOffice: Fampidirana ny mpampiasa interface tsara